Kuleejka iyo Shaqada | BGA
Kuleejka iyo Xirfadda
Baadh xiriiradaan si aad wax dheeraad ah uga ogaato kulleejooyinka ka qalin jabiya BGA ee dhigta; ilaha loogu talagalay ardayda, waalidiinta iyo mas'uuliyiinta, iyo shaqaalaha Kulliyadda iyo Xirfadda .
Hadafka Kulliyada iyo waaxda Shaqada:
Si loo hubiyo in ardayda oo dhami ay diyaar u yihiin in ay gaaraan himilooyinkooda dugsiga sare ka dib ee ah dhigashada kulleejada ama gelitaanka waddada xirfadeed gaar ah.
Waxaan u diyaarinaa ardayda oo dhan inay soo gudbiyaan dalabyada kulleejyada iyo barnaamijyada shaqada ee dalka oo dhan iyagoo kaashanaya baarista mihnadaha, kuliyadaha iyo codsiyada kaalmada maaliyadeed, iyo horumarinta garaadka / dareenka bulshada iyo “xirfadaha jilicsan”.
Kulliyadeena iyo shaqaalaheena shaqadu waxay hagaan ardayda nidaamka codsiga kuleejka, oo ay kujirto xulashada kulleejada, imtixaannada laga soo galo, nuts iyo dheelitirka codsiyada, iyo kaalmada maaliyadeed. Waxaan ka shaqeynaa sidii aan ugu abuuri lahayn fursado ardaydayada labada Dugsiga Dhexe iyo Dugsiga Sare si aan uga qeyb galno nashaadaadyo ku dhiirrigelinaya inay arkaan in guusha waxbarashadooda iyo ikhtiyaarrada mustaqbalkooda ay gacanta u galaan, anagoo ku daneyneynna taageero ballaaran oo la siiyo ardayda da'da yar iyo waayeelka. Waxaan ku raaxeysanahay shaqada ah inaan barano ardaydeena iyo garashada fursadaha dugsiga sare ka dib oo ku habboon danahooda, hibbadooda, iyo hamigooda.
Hubso inaad eegto Wargeyskeena oo ka buuxa talooyin iyo xiriiro!